3 B2B Saleskpụrụ Ahịa nke Atụmatụ Gị Ga-enwerịrị Taa | Martech Zone
3 B2B Saleskpụrụ ahia nke usoro gị ga-etinye taa
Wenezde, August 17, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 John-Henry Scherck
Ahịa, dị ka ụlọ ọrụ, na-agbanwe ngwa ngwa. Ndị otu na-ere ahịa enweela ike ịmekwu mmụba na usoro ha, mana n'ime afọ ole na ole gara aga, ahịa abanyela n'ọgbọ ọhụrụ nke teknụzụ, nyocha na mgbanwe dị egwu na omume ndị ahịa. Ndị ọrụ ahịa etinyewo uche ọhụrụ na iji teknụzụ tụọ ọrụ ịre ahịa ahịa ma melite arụmọrụ site na nyocha ọnụọgụ na nnwale na usoro na atụmatụ.
Ọ bụrụ na ị jiri otu ndị ahịa ọgbara ọhụrụ tụnyere otu n’ime ngwụcha afọ 90, ọdịiche dị abalị na ehihie. Omume nke ịkụ pavụ na ịkpọ onye ọ bụla na onye ọ bụla ịtụ ụjọ na-eduga anwụ. Ma…. ọ bụghị ndị otu niile na-anabata ụkpụrụ ọhụụ nke ire ere. Fọdụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-esote ndị na-asọmpi ha ma na-agbasi mbọ ike imeghari oge. Ọ bụ ya mere Zipu otu tinyekọtara nke a infographic na-akọwa otú ala ahịa si malite na ihe ìgwè. Ndị a bụ ụzọ kachasị mkpa:
Gịnị Dị Njọ n’usoro Omenala Azụma Ahịa?
Ọtụtụ! Mgbe ndị otu na-ewe ndị na-ere ahịa n'otu n'otu bụ ndị na-ahụ maka ị nweta ndu ha ma mechie azụmahịa ha, ọ nwere ike belata ikike ndị otu ịre ahịa ịba ụba ma mepụta ụfọdụ nsogbu siri ike:
Kedu ka ndị ahịa B2B siri gbanwee Usoro Ọrịre?
Ndị na-azụ sọftụwia B2B nwere ohere ịnweta ozi gbasara oke ngwaahịa na ndị na-ere ahịa. Imirikiti ndị na-azụ ahịa na-eme nnyocha sara mbara tupu ha edejupụta akwụkwọ ndu ma ọ bụ ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa. Oldzọ ochie nke ire ahịa mere ka ndị nche ọnụ ụzọ nke ihe ọmụma ngwaahịa: ha nwere ike ịgwa gị gbasara onyinye ma kwuo gị na ọnụahịa, yana n'ihi na ozi ahụ adịghị n'ihu ọha. Nke a abụghịzi ikpe; ugbu a, ndị ọkachamara n’ahịa na-ahụ maka ịchọta azụmaahịa na ihe mgbu ma belata ihe mgbu ahụ na ngwaahịa ha. Ọrụ ha bụ ịmepụta nkwekọrịta n'etiti ndị niile metụtara ya n'ime nzukọ mgbe ha na-emeri nkwenye ma belata arịrịọ pụrụ iche maka ịhazi nke na-akpata mgbagwoju anya ọzọ. Na Aka Aka Aka Aka site na CEB, a na-achọpụta usoro anọ dị ka ndị nwere ike igbochi maka ire ahịa ọgbara ọhụrụ:
Kedụ ka Otu Ndị Ahịa Ga-esi Gafeta na Oge?
Ọ bụrụ n’ị na-ejikwa otu ndị na-ere ahịa ugbu a aga azụ azụ, enwere ụkpụrụ atọ ị nwere ike iburu n’obi nke ga-eme ka gị na ndị otu gị nwee ọsịsọ:
Mepụta ọdịbendị nke ịrụkọ ọrụ ọnụ
Mee ulo ahia ahia n’oge a
Enwere ike ịkọwa mkpokọ ahịa naanị dị ka teknụzụ na sọftụwia ndị otu ahịa na-eji enyere aka ahịa ya. Site na iwulite ngwanrọ ngwanrọ nke nwere ike ijikwa ma meziwanye mmepe ahịa, nkwupụta, na mmechi, ị nwere ike ịmepụta ọrụ pụrụ iche maka ndị ahịa gị nke ahaziri maka usoro ọ bụla nke usoro ahịa gị. Site na ngwanrọ nke igwe ojii, ndị isi ahịa agaghịzi arụ ọrụ na IT iji wepụta ihe ngwanrọ ọhụrụ maka otu ha. Nke a na-enye ha ohere ịgbakwunye, wepu ma dochie ngwa ngwa
Site na ngwanrọ nke igwe ojii, ndị isi ahịa agaghịzi arụ ọrụ na IT iji wepụta ihe ngwanrọ ọhụrụ maka otu ha. Nke a na-enye ha ohere itinye ngwa ngwa, wepu ma dochie sọftụwia na nchịkọta ha ka ha wee nwee ike ịnwale ma chọta ntọala kacha mma maka otu ha.
Mee ọrụ pụrụ iche
N'akwụkwọ mgbanwe ya, Enwere ike venuetụ Ego, Aaron Ross na-akọwa ihe mere ị ga - eji na - eche maka ire ahịa na - emechi ma mechie azụmahịa gị site na ọrụ abụọ dị iche iche na otu gị. Protụ anya ịbanye ma ọ bụ ịpụ apụ na-adaba n'apata nke Onye Nlere Azụmaahịa Ahịa, ma ọ bụ SDR. Na ndị isi akaụntụ flipside, ọrụ dịịrị maka ọtụtụ nkwukọrịta, nkwekọrịta nkwekọrịta, yana mmechi ga-ewere usoro nka dị iche. Site na ịkpa iche iche, ndị na - etinye aka na ndị ahịa gị ma lekwasị anya na iwulite usoro nka dị warara ma nụchaa.
Na ndị isi akaụntụ flipside, ọrụ dịịrị maka ọtụtụ nkwukọrịta, nkwekọrịta nkwekọrịta, yana mmechi ga-ewere usoro nka dị iche. Site na ịkpa iche iche, ndị na - etinye aka na ndị ahịa gị ma lekwasị anya na iwulite usoro nka dị warara ma nụchaa.
Kwado ndị na-ere gị!
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ọfịs ndị na-ere ahịa ọdịnala maka anụ ọhịa wolf ọhịa na-achịkwa ala. Ndị na-ere ahịa a anaghị achọ ka ha na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe ma ọ bụ na-emekọ ihe. Ha na-arịọkarị ka ha bụrụ hapụrụ naanị ya mere ha nwere ike kụrụ nọmba ha - na ozugbo ha kụrụ nọmba ha maka ọnwa ahụ, ha na-akwakọ ngwongwo ha laa. Na ụdị ntọala a, a naghị akwado ndị na-ere ahịa (ma ọ gaghị achọ ya mgbe enyere ha).
Nke a abụghị ikpe ọzọ, otu ndị na-ere ahịa n'oge a na-akwado arụmọrụ ahịa, ndị nyocha, ndị mmepe, nkwado ahịa, yana ọtụtụ otu chọrọ ọzụzụ na-aga n'ihu. Ihe odide a na-akwado ndị edemede na-enye ndị na-ere ha ngwaọrụ ha chọrọ iji nwee ọganiihu ma hapụ ha ka ha lekwasị anya n'ire. A ọmụmụ site na McKinsey chọpụtara na ndị otu ahịa nwetara ROI kachasị elu mgbe ihe dị ka 50-60% nke ndị otu na-arụ ọrụ raara onwe ha nye iji kwado ndị na-ere ahịa n'ezie
Ndị ahịa ọgbara ọhụrụ na-etinye ego na teknụzụ, na-anwale usoro na usoro, na-arụkọ ọrụ ọnụ karịa ka ọ dịbu na ọkachamara na ọrụ ndị chọrọ nhụsianya dị warara ka ị na-emepewanye nka dị omimi. Oge ọhụụ nke ire ahịa amalitela, ma ọ bụrụ na ndị otu gị na-eleghara usoro ndị a anya - ha nwere ike bụrụ ihe mgbe ochie.
Tags: aron rossndị isi ụlọ ọrụb2b ahịa mkpọcebCRMnjikwa azụmahịademoozi ịntanetịMatthew Dixonigwe okuenweta ego buru amụmangosiNa-atụ anyaọdịnaya ahịaire eremkpọkọ ahịankwado ahịateknụzụ ire erena-elekọta mmadụ na-ereonye na-ama aka mgba
John-Henry bụ onye njikwa azụmaahịa uto maka Zipu. Ọ bụ B2B SaaS marketer ọkachamara na njikarịcha njin ọchụchọ, ọgụgụ isi asọmpi, WordPress, nchịkọta, ọdịnaya, ọgbọ ndu na ntụgharị.
Weghachi ụzọ vs 250ok: Email Napụta Software na Ọrụ
Ihe 4 P nke Nchọpụta Nchọpụta Ọgbara Ọhụrụ